Chautari Daily » नेपाल टेलिकमको रिङब्याक टोनमा कोरोनाबाट जोगिने सन्देश दिने आवाज कस्को हो? जान्नुहोस् ।
नेपाल टेलिकमको रिङब्याक टोनमा कोरोनाबाट जोगिने सन्देश दिने आवाज कस्को हो? जान्नुहोस् ।
काठमाडौं / नेपाल टेलिकमले कोरोना भाइरसको संक्रमणको सतर्कताका लागि रिंगब्याक टोनमा सचेतना सन्देश दिन थालेको छ ।पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एबम युवा नेता गगन थापाले गत चैत्र २ गते नेपाल टेलिकमका कार्यकारी निर्देशक कार्यालयमा गएर कोरोना संक्रमणको सतर्कताका लागि सचेतनामूलकरिंगब्याक टोनमा( CRBT) राखिदिन अनुरोध गर्नु भएको थियो ।
सन्देशको विषय र क्रममा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले धेरै काम गर्नुपर्ने छ, आज आफ्नो सामाजिक संजाल मार्फत तत्काल शुरूगर्ने वचन आजको दिन देखि सुरु भएकोमा धन्यबाद दिनु भएको छ ।
कुनै पनि नम्बरबाट नेपाल टेकिलमको नम्बरमा सम्पर्क गर्दा कोरोनाको लक्षण र त्यसबाट कसरी सुरक्षित रहने भन्नेसहितको सन्देश दिन थालिएको हो । पटक-पटक सावुनपानीले हात धुन, व्यक्तीहरुसँग समाजिक दूरी कायम गर्न सन्देशमा भनिएको छ ।
टेलिकमले कोरोनाबाट बच्न अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षाका जानकारीसहितको रिंगब्याक टोन राखेको हो । फोन नउठ्दासम्म यस्तो सन्देशसहितको सचेतना ब्याक टोन बज्नेछ ।
रिङब्याक टोनमा सुनिने सुमधुर आवाज कस्को हो भन्ने तपाईंको मनमा लागेको छ भने , उनिहुन् नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत सञ्चारकर्मी अनिता विन्दु । केही समय अगाडि नेपाल टेलिभिजन इटहरी च्यानलको शुभारम्भ कार्यक्रम उद्घोष गर्ने क्रममा बोली चिप्लिएपछि उनी चर्चामा आएकी थिइन् ।
प्रकाशित मिति ६ चैत्र २०७६, बिहीबार १७:२२